Ireo no vaovao rehetra ilaozan'ny CES 2017 | Vaovao momba ny gadget
Villamandos | | Events
El Fampisehoana Elektronika ho an'ny mpanjifa 2017 Tantara izany ary ny hetsika natao tany Las Vegas dia nampidina ny jamba hatramin'ny taona manaraka, taorian'ny andro vitsivitsy feno famelabelarana, hetsika ary tsy manam-petra ny vaovao izay natolotray anao tamin'ny alàlan'ireo lahatsoratra samihafa navoakanay.
Raha tsy nanam-potoana hampifantohana ny masonao amin'ny CES ianao dia tsy maninona izany, ary androany izahay haneho aminao ny vaovao rehetra nilaozan'ny CES 2017. Tsy vitsy ireo, fa tavela tao izahay miaraka amin'ny faniriana hahita fampisehoana na fisehoana malaza eo amin'ny sehatry ny fitaovana tena mahavariana na mampanantena. Tsy mbola nisy izany ary ankehitriny dia fotoana tokony hipetrahana sy hamerenana ireo zavatra marobe hitantsika tamin'ity hetsika misy ifandraisany amin'ny tany ity.
1 Smartphone, tontolo saika tsy azo kitikitika an'i CES
2 Alexa, ilay mpanampy an'i Amazon
3 Fiara mizaka tena
4 Fahitalavitra, iray amin'ireo tanjaky ny CES
5 Misy tranokala ao amin'ny CES ho an'ny mpilalao
Smartphone, tontolo saika tsy azo kitikitika an'i CES
Afaka herinandro vitsivitsy dia hanomboka ao Barcelona ny Kongresin'ny World Mobile izay hihaonan'ireo mpanamboatra fitaovana finday malaza indrindra hanolotra ny fivoaran'izy ireo vaovao amin'ity taona 2017 ity. Izany dia mahatonga ny CES ho hetsika iray izay tsy ny finday avo lenta no mpiorina voalohany, satria mitranga amin'ny maro izany. hetsika hafa.
Huawei dia sahy naneho izany Manaja Magic, izay efa natolony tamin'ny fomba ofisialy andro lasa izay tamin'ny hetsika iray tany Shina. Mpanamboatra sinoa hafa toa an'i Xiaomi no nanamafy izany tamin'ny fomba ofisialy ny Mi Mix dia ho avy tsy ho ela amin'ny endriny fotsy any Chine ihany ary nanararaotra nanamafy ny heviny fa ny sainam-panahiny vaovao no fitaovana amin'ny ho avy. Miaraka amin'ny OnePlus izahay dia manidy ny faribolana Sinoa ary izany ihany koa ny mpanamboatra avy amin'ny firenena Aziatika nanambara ny OnePlus 3T amin'ny volamena.
Asus dia tsy sahy nanova loko fotsiny fa nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Asus ZenFone AR ary ny Asus ZenFone 3 Zoom. BlackBerry no mpanamboatra farany niseho teto an-toerana, nanolotra fitaovana vaovao, ny BlackBerry Mercury, izay hanandramany indray ny toerana izay nisy hatramin'ny tsenan'ny finday.
Alexa, ilay mpanampy an'i Amazon
Na eo aza ny tsy fanatrehany ny CES 2017, Amazon dia iray amin'ireo mpandray anjara lehibe, misaotra an'i Alexa mpanampy azy izay ampidirina amina fitaovana ampolony mahery atolotra mandritra ny hetsika natao tany Las Vegas. Tsy nieritreritra mihitsy i Jeff Bezos, mpanorina sy CEO an'ny Amazon fa afaka mandeha lavitra miaraka amin'i Alexa izy ireo raha vao nampiditra azy ireo tamin'ny fomba ofisialy.
Anisan'ireo fitaovana malaza indrindra izay isehoan'ny Alexa integrated, misongadina izao manaraka izao;
LG dia nampiditra vata fampangatsiahana vaovao sy robot iray izay azo fehezina amin'ny fampiasana Alexa
Ny tsipika fanasana lovia, vata fampangatsiahana ary fatana vaovao an'ny Whirlpool dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny mpanampy Amazon
Samsung dia tsy nanadino ny fotoana nifanarahany tamin'i Alexa ary ny kifafa robot vaovao dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny feo, zavatra mety ahazoana aina tokoa ary ambonin'izay rehetra azo ampiharina
Lenovo, iray amin'ireo mpanamboatra amin'izao fotoana izao, dia nanolotra mpanampy an-trano marani-tsaina izay miorina amin'ny Alexa
Hatramin'izao, ny mpanampy an'i Amazon dia nampidirina tao amin'ireo fitaovan'ny fivarotana virtoaly lehibe ihany, saingy tao anatin'ny fotoana fohy dia nahavita nanao dingana hafa tamin'ny fitaovana maro hafa izy, avy amina mpamokatra maro be, izay toa nisafidy Alexa fa tsy iray amin'ireo mpanampy virtoaly maro hafa izay misy eny an-tsena.
Fiara mizaka tena
Ny CES dia mihazakazaka makiazy ho lasa seho maotera, na dia misy tsy fitovizany amin'ny an'ny androm-piainany aza, ary ao anatin'ity fiara tsy miankina sy elektrika ity ihany no hita fa lamaody sy malaza kokoa.
Amin'ity fanontana ity ny hetsika natao tany Las Vegas dia afaka nahita ny fiaran'ny sasany amin'ireo mpanamboatra malaza indrindra amin'ny sehatra iraisam-pirenena toa an'i BMW, Honda, Hyundai, Toyota na Nissan izahay. Ho fanampin'izay, nanana ny toerany koa i Ford, izay nanolotra ny kinova hybrid voalohany an'ny Mustang angano.
Tsy afaka nahita fiara vaovao fotsiny isika, fa misy ihany koa ireo mpanamboatra sasany toa an'i Chrysler sy Hyundai nampiditra ny Android tao anaty fiaran'izy ireo na ny fomba hampiharan'i Nissan an'i Cortana, mpanampy virtoaly an'i Microsoft, amin'ny sasany amin'ireo fiara vaovaony.
Fahitalavitra, iray amin'ireo tanjaky ny CES
Ny andiany farany an'ny CES dia nisy televiziona ho mpandray anjara fototra. Ary moa ve ny sasany amin'ireo mpanamboatra malaza indrindra eto amin'ity tsena ity dia nanapa-kevitra ny hampiseho ireo fitaovany vaovao amin'ity hetsika ity, izay toerana mahazatra ny "curves" sy ny "4K".
Anisan'ireo zava-baovao hitanay tato ho ato izay manasongadina ny vaovao OLED W7 avy amin'ny LG izay 2.57 milimetatra fotsiny ny hatevinyKa inona no mitovy izay mahia kokoa noho ny rantsan-tanan'ny tananao. Samsung mazava ho azy dia tsy te ho tavela ary noho izany dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny tsipika Q vaovao izay mirehareha amin'ny fananana hateviny tsy azo sandaina ary koa iray amin'ireo hazavana avo indrindra eny an-tsena.
Sony, iray amin'ireo lehibe eo amin'ny tsenan'ny fahitalavitra, nahavita nihoatra ny Samsung sy LG, ary tamin'ny alàlan'ny fitaovana vaovao dia nahasarika ny sain'ny mpanatrika CES rehetra izy. Ary tsy noho ny fisaorana kely noho ny azy io Fahitalavitra matevina 2.5 milimetatra izay mampiasa ny efijery azy manokana ho mpandahateny, manetsiketsika azy hanamafisana ny feony.
Mazava ho azy ary toy ny isan-taona dia afaka nahita ny fanavaozana tena isan-karazany isika, amin'ny fahitalavitra goavambe, miaraka amina endrika revolisionera ary miaraka amin'ireo teknolojia vaovao nampidirina izay tsy isalasalana fa ho zavatra iray amin'ny andavanandro indrindra amin'ny ho avy tsy ho ela.
Misy tranokala ao amin'ny CES ho an'ny mpilalao
Na dia azontsika atao aza ny milaza fa ny solosaina dia mandeha mihoatra ny tsy tsikaritry ny CES, ireo Gamers dia manohy manana ny toerany amin'ity hetsika ity ary vitsy ny mpanamboatra nahatsiaro an'ity vondrona mpampiasa ity.
ACER Ohatra, nanolotra solosaina finday izy, izay azontsika faritana tsy misy olana amin'ny maha biby tena izy, izay ho nofinofin'ireo mpankafy lalao computer, noho io Sarimihetsika miolaka 21-inch, ny 64 GB RAM na ny processeur Intel Core i7 farany izay miakatra ao anatinyr. Mampalahelo fa, araka ny nolazainay, dia ho nofinofy ho an'ny maro izany ary izany dia 9.000 euro ny vidiny ifotony.
Ny iray amin'ireo mpanamboatra nahavita nahasarika ny sain'ny mpanatrika dia Razer izay nanolotra tetikasa manitatra ny sarin'ny efijery mandritra ny androm-piainana amin'ny rindrina ary koa ny solosaina finday tsy misy zavatra hafa ary tsy latsa-danja ny efijery 17-inch telo izay miafina ao amin'ny fonony ambony.
Inona ilay fitaovana nanintona ny sainao ny ankamaroan'ireo natolotra tamin'ity CES 2017 ity? Lazao anay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Events » Ireo no vaovao rehetra navelan'ny CES 2017 ho antsika
Hanjary tsy hiankina amin'ny Hangouts intsony i Google Voice